တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲ ယခင်နှစ်ကထက် မီးပုံးပျံ ၁ဝ လုံးခန့်လျာ့နည်း ဟ?? - Yangon Media Group
တောင်ကြီး၊ အောက်တိုဘာ ၁၇
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲတော် ကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်အထိ အဝေရာကုန်းသာယာမီးပုံးပျံကွင်း၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်မီးပုံးပျံများ ယခင်နှစ်ကထက် အနည်းငယ်လျော့နည်းကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ် တောင်ကြီးတန် ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲတွင် ညမီး ကြီး ၈၈ လုံး၊ စိန်နားပန် ၃၉ လုံး၊ နေ့လွှတ်ခြေနှစ်ချောင်း ၁၄၄ လုံး၊ ခြေလေးချောင်း ၇၂ လုံးနှင့် အရုပ် အုပ်စုအလုံး ၅ဝ၊ စုစုပေါင်းမီးပုံးပျံ ၃၉၃ လုံးယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့က နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ လွှတ်ရမယ်ဗျ။ ဒီနှစ်မှ စဝင်ပြိုင်မှာဆိုတော့ အခက်အခဲ အနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံနဲ့ကိုယ်စကေးချတဲ့အခါ ရုပ်လုံးပုံတွေမတူမှာ စိုးရိမ်မိတယ်။ စလုပ်တာဆိုတော့ ပစ္စည်းခဏခဏသွားဝယ်ရတယ်။ သူများဆီမှာ ကူညီတာထက် ပိုပြီးအားစိုက်လုပ်ရတယ်”ဟု နေ့လွှတ်မီး ပုံးပျံပြုလုပ်နေသောမျိုးဆက်သစ် မီးဆရာချစ်ကိုကိုက ပြောသည်။ ယခုနှစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည့်ပြိုင်ပွဲဝင်မီးပုံးပျံများသည် ယခင်နှစ်ထက် ၁ဝ လုံး ခန့်လျော့နည်းသွားပြီး ညမီးကြီးမီးပုံးပျံကိုယ်ထည်များ၊ စိန်နားပန် အောက်ဆွဲများတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ် ကြော်ငြာများ လုံးဝခွင့်မပြုကြောင်း ကျင်းပရေးကော်မတီမှ သိရသည်။ ”ဒီနှစ်တော့ မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲဝင် တွေ အရင်နှစ်ထက်နည်းမယ်ဗျ။ Sponsor ပေးတဲ့ မီးပုံးတွေက လည်း ဒီနှစ်မှာသိပ်မရှိတာတွေ့ရတယ်”ဟု မီးဆရာကပြောသည်။
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပွဲတော်အတွက် ဆိုင်ခန်းလေလံကို ကျပ် ၂၈ဝ၂ သိန်းဖြင့် မွှေး တောင်ကြီးမှ လေလံအောင်မြင် သွားပြီးယခုအခါဆိုင်ခန်းများ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိကာ လုံခြုံရေးကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် အမှတ်(၁၈)ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ကလည်း စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ် မောင်းနှင်မှုများနှင့်ယာဉ်ရပ်နားမှုများတွေ့ရှိပါက အရေးယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် တန်ဆောင်တိုင်မီး ပုံးပျံပြိုင်ပွဲဆုကြေးများကို ယခင်ကထက် တိုးမြှင့်ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ကျင်းပရေးကော်မတီထံမှ သိရသော်လည်း ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်မီးပုံးများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် အနည်းငယ် လျော့နည်းသွား ကြောင်းသိရသည်။
တတိယအကြိမ် စစ်တောင်းမြစ်ရေ တက်မှုကြောင့် တောင်ငူမြို့ ၌ နေအိမ် ၅ဝဝ ကျော် ရေဝင်ရောက်၊ ဒေသခံ ၃??
သင် . . . စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီလား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဝါးစက်မှုဇုန်တစ်ခု တည်ထောင်သွားရန် စီစဉ်နေ
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် မြဝတီမြို့ ရွှေမြစန္ဒီအိမ်ရာ စီမံကိန်းရှိနေအိမ်များ??
နယူးကာဆယ် ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပါက မော်ရင်ဟို သို့မဟုတ် ဝင်းဂါးကို ခါလက် ခန့်အပ်မည်